Falfalli Gowwaa Hin Dhokatu });
Falfalli Gowwaa Hin Dhokatu
Wal gahiilee adda addaa godhatuu dhaan mari’achuu, yaada wal jijjiiruu fi wal qajeelchuun saba rakkoo siyaasaa keessa jiru keessatti hafnaan isa bilisummaa qabu birattuu fudhatama qaba. Walgahiin yaada ijaaraa, furmaata dhibdee siyaasaa irratti mari’atu, daandii egeree ummataa addeessee himuu dhaan furmaata akeeku dhuguma bakkayyuutti barbaachisaa dha. Kan balaaleffatamuu fi mormamu ajandaa qabsoo ummataa naaffisu ittiin masakaman tarkaanfachiisuuf yaaduu dha.
Maqaa ummataa fi qabsoon dhaadataa dantaa ofiif fiiguun abaaramuu fi dura dhaabbatamuu qaba. Guyyaa ummata Oromoof kan dubbatan fakkaatanii halkan diina waliin kanneen karoora baafataa bulan ykn akeeka diinaa fiixa baasuuf shira xaxan hundi ummata jalaa dhokatuu hin danda’an. Wal gahiin shira akkanaan guutame Ummata Oromoof haaraa miti. Wal gahiilee akkanaa hedduu argee jira. Itti baha wal gahiilee akkanaas argee taajjabeera. Summiin dammaan makame isaaf qopheessan akkanaas kanneen qopheessan isaa galaafatu arge malee qabsoo bilisummaa ummata Oromoo gufachiisuu akka hin danda’iin irraa dhokataa miti.
Dhiheenya kana Sadaasa 11-13, 2016 wal gahiin ‘Hogganoota Oromoo’ jedhamu Atlaantaatti gaggeeffamuu Oromoon, addatti ammoo Oromoon biyya ambaa qubatee hin dhagahiin hafe hin jiru. Wal gahiin fakkaataa kanaa kanaan duras biyyuma Amerikaa keessatti gaggeeffamee akka ture ni yaadatama. Wal gahiin Menesootaa 2008 ABO irraa foxxoquun jijjiirama argamsiifna jedhanii achi bahan ABO abaaruu fi abaarsisuun xumurame. Ummata walitti qabaniif waadaan seenan, Oromiyaa baatiilee keessatti bilisoomsina jedhu kan maallaqa ittiin guurratan tahuu irra hin dabarre. Dhaadannoon qabsoo finiinsisnaa dhageessisaa turan galma wal gahii sanaatti hafe malee waliin hin baane. Kanneen ABO abaaruun galma goosaa turan hundis torbanootaan booda waliyyuu gananii bakka adda addaatti caccabuu ummatatu arge. Kan irratti walii galuu danda’anii fi irratti mari’atan ABO dadhabsiisuu irratti malee kaayyoo fi akeeka irratti waan hin turreef umriin gabaabbate. Summiin ABO ittiin galaafatuuf qopheessan isaanuma galaafate.
Bara 2008 boodas gareen ‘Maanguddoota, Bu’uuressitootaa fi Gameeyyii’ ofiin jedhan araara buusna, tokkummaa argamsiifna, mooraa qabsoo Oromoo gabbisna jedhanii diaspora hojoomsaa akka turan hin dagatamu. Gareen kunis taanaan mooraa qabsoo bilisummaa itichuuf osoo hin taane akeeka dhokataa ofii tarkaanfachiisuu kan barbaadaniin kan dhuunfatame tahuu fi hundaan olitti ammoo ABO irratti shiruu galii godhatanii waan sosso’aa turaniif, akeekni isaanii gatatee hafe. Gareen kunis dhuma irratti akeeka faallaa bilisuummaa ummata Oromoo qabu ifa gochuun mooraa isa keessumsiisuu danda’utti xaxatee gale. Seenaa dabre kana kaasuun kan ammaa wal yaadachiisuufi.
Haala salphinaa fi qaanii, haala gaddisiisaa fi lammii hunda aarsaa jiru, ummata Oromoo fi Oromiyaa irratti raawwatamaa jiruuf ammatti kan barbaachisu lammii ummata jajjabeessu, rakkoo keessa jiruuf dirmatu, gaafa xiiqii fi morkaa waliin dhaabbatu malee halaala fagoo irraa qajeelfama itti dabarsu ykn maqaa ummataan daldalu miti. Kan Jaarmayaa isaa akka qaroo ija isaatti ilaalu abaaruu hin barbaadu. Ilmaan isaa gaachanaa fi abdii ummata Oromoo jedhee ittiin dhaadatu kan jalaa balaaleffatu keessummeessuuf qophii miti. Osoo hin filatinii fi bakka hin buufatin nutu si hooggana kanneen ittiin jedhan irraas homaatuu hin eegu. Waltajjii kanneen diina waliin michoomuun ilmaan ummataa ficcisiisaa turan, ‘Sichi adda adda keessa rasaasaan dhoofna’ jechuun dhaadataa turan irratti faarfaman, kanneen bu’aa bahii qabsoo hunda danda’uun akeeka isaanii irratti cichuun qabsoo armaan gahan, kanneen dhiigaa fi lafee isaaniin qabsoo Oromoo sadarkaa boonsaa har’a irra gahe dhaqqabsiisan irratti abaaraman irraa silas ummaatni Oromoo maal eega?
ABOn eenyu iyyuu wal gahii fedhe gaggeeffatuu fi jaarmayaa barbaade labsatuu irraa mormii hin qabu. Kan akeeka isaa dura dhaabbatu kamiyyuu of irraa ittisa. Kanaaf ammoo dandeettiis gahummaas itti qaba. Hundaan olitti kanneen wareegama ummata keenyaa, miseensota ABO, Qeerroo fi WBO-xiqqeessanii fi wareegama isaanii haguuguu yaalan jabeessee dura dhaabbata.
Waliigala kanneen ABO abaaruun ykn qophxeessuun qabsoo bilisummaa irratti abbaa of taasisuuf munyuuqan hunda kan of irraa ittisu tahuu hubachiisaa, kanneen walgahii Atlaantaa qopheessan, kan ABO balaaleffatee fi balaaleffachiise hundi ifatti ABO, Qeerroo, WBO fi ummata Oromoo dhiifama akka gaafatan ABO yaadachiisa. Dhuma irrattis ABOn shiroota diinaa fi masaanotaa irra aanaa akka har’a gahe, fuula durattis irra aanee qabsoo itti fufuu irraa humnii fi shirri isa dhaabuu danda’u kan hin jirre tahuu gadi jabeessee hubachiisa. ‘Duti saree gaala deemsa irraa hin dhaabu.’